सल्यानमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार बिकासमा रु. २ करोड खर्च गरिदैँ « Salyan Today
सल्यानमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार बिकासमा रु. २ करोड खर्च गरिदैँ
सल्यानमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार बिकासमा रु. २ करोड खर्च गर्न लागिएको छ । जिल्लामा रहेका बिभिन्न प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको पूर्वाधार बिकासमा रु. २ करोड खर्च लागिएको हो । प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाले अब्बल मानिएको सल्यानमा चालु आर्थिक बर्षमा ती सम्पदाहरुको पूर्वाधार बिकास गर्न लागिएको छ ।
जिल्लाको प्रमुख पर्यटकिय क्षेत्र कुपिण्डे ताल, खैरावाङ मन्दिर, छत्रेश्वरी लगाएतका सम्पदाहरुमा पूर्वाधार बिकास गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन बिकासमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले पूर्वाधार बिकासको काम शुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटबाट वन कार्यालय मार्फत जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधारको काम शुरु गरिएको छ । जस अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लाका ६ वटा पर्यटकिय क्षेत्रमा रु. २ करोड बराबरको पूर्वाधार बिकास गर्न थालिएको डिभिजनल वन अधिकृत रमेश कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
जस अन्र्तगत कुपिण्डे तालमा पूर्वाधार बिकासको लागी रु. ४० लाख, खैरावाङ मन्दिरमा रु. ४० लाख, छत्रेश्वरी धाम पूर्वाधार बिकासको लागी रु. ३० लाख, चाँदनी सातसते गुफाको लागी रु. २० लाख, लक्ष्मीपुर पर्यटन पूर्वाधारको लागी रु. २० लाख र सिद्ध गुफा पर्यटन पूर्वाधारको लागी रु. ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
ती मध्ये छत्रेश्वरी धाम, चाँदनी साततले गुफा र खैरावाङ मन्दिरमा पूर्वाधार बिकासको लागी सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँको भनाई छ । बाँकी तीन ठाँउको कार्यालयले सर्वे गरी लागत अनुमान तयार पारेको र सम्झौता गरेर काम अगाडी बढाउने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
उहाँले जिल्लाका पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा सिढी, प्रतिक्षालय, प्रवेशद्धार लगाएतका बिभिन्न कामहरु सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागी सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण समयमा नै काम सुचारु गर्न नसकिएको बताउदैँ उहाँले अहिले आबश्यक सर्तकता सहित भौतिक दुरी कायम गरेर काम सुचारु गरिएको बताउनुभयो ।